Nzira yekuzadzisa Amazon mutengesi wepakati ne keywords nenzira yakarurama?
Pamberi pezvimwe zvinhu, ngatishandisei - keyword uye kutsvaga nguva yekutsvaga kuAmazambique zvakasiyana zvikuru kana tichienzaniswa nemhando ipi zvayo yekutsvaga injini seGoogle pachayo. Ndinoreva, somuenzaniso, mamiriro ezvinhu kana iwe uchida kuisa zvizhinji zvemashoko anokosha uye mazwi ekutsvaga kutsva-mutsva - zvakananga kune zvikamu zvakakosha zvejiji rako rechigadzirwa chinonzi Amazon mutengesi central backend keywords chikamu. Ndiyo nzvimbo yakanaka yekuisa mazwi ose anoshanda kune chinhu chako / chikwata chechikwata, asi uchiri kukundikana kuwana nzvimbo yavo mune zvinyorwa zvemusoro wako, kana muenzaniso wezveruzhinji - free safecracker slot.
Your Amazon seller central keywords chikamu chikamu chakanaka chekushandisa zvakasiyana-siyana mazita akasiyana-siyana izvo zvisingamboiti chero kubatanidzwa kwekuonekwa (semuenzaniso, kazhinji kasingazivikanwi akazova mazwi makuru nenzira yavo pachavo, zvinyorwa zvinyorwa, maSV pamwe chete, etc. ).
Amazon Seller Central Backend Keywords
Cherechedza, izvo zvinobva kutanga kwegore ra2017 minda mikuru yeAmazon mutengesi wepakati key keywords zvikamu zvakanyoreswa nemashira 250 chete. Zvinoreva kuti mutengesi wese wekutsvaga muAmazon anofanirwa kuve akashanda kuti ave nezvose zviripo nekugadziridza kwakakodzera kunotorwa nenzira yakakodzera. Ndicho chikonzero pasi apa ndichaenda kuzokuratidza sechitsva chemashoko uye mazano anobatsira ku Amazon yako mutengesi central backend keywords chikamu. Funga nezvemashoko anotevera nekutaura paunenge uchigadzirisa:
. Nenzira iyo, cherechedza, zvisinei, kuti hapana chikonzero chekudzokorora chero chinhu chimwe chete chinyorwa-nokuti sezvo Amazon ichavhara kusanganisa kwakasiyana kwemarefu-mutsva kutsvaga mazwi mukati mishanu mikuru backend minda nekusingaperi.
Edza kupinda mazwi makuru akasiyana akasiyana-siyana pane imwe neimwe yeminda shanu sezvinogona. Zvakare - hazvidikanwe zvachose kushandisa chero chinhu chimwechete chinyorwa kakawanda. Iwe zviri nani kushandisa nzvimbo iyoyo shoma nekuchenjera.
Funga nezvevanhu vanochengetedza mauri Amazon mutengesi wepakati backend keywords sections. Yeuka, kunyange kunyange vanhu vashomanana vakaderedzwa, dzimwe nguva unogona kuwedzera izwi rose rekutsvaga.
Kudzokorora chero kupi zvako kuburikidza nenzira yekushandisa hyphenated keywords kunofanira kudziviswa zvakare. Ramba uchiyeuka kuti kubva mumaonero kana Amazon A9 yekutsvaga shanduro yegorgorithm, mazwi maviri chete akabatanidzwa nekanguva pfupi akave akavhara zvose zvinogona kuitwa nemashoko nemashoko akabatanidzwa. Mutemo iwoyo ndeye tsamba dzepamusoro uye dzezasi, mazwi okuzadza / emira, zvinyorwa zvinokurudzira (ita nechokwadi kuti dzinodziviswa pamutengo wose!).
Zvose zvinonyanya kukosha kana mutsara-mutsara inofanira kuparadzaniswa chete nemikana isina chinhu. Ndinoreva kuti zvikwereti hazvisakoshi zvachose, iwe zviri nani usavarega vachitora iyo inokosha yemunhu.
Pashure pezvose, ita kuti ushandise nzvimbo yose mu Amazon yako mutengesi central backend keywords chikamu. Nenzira iyo, usakanganwa kuva nekaviri-chengetedza kuti zvinhu zvose zvivepo pasina kusanganisira chero mazwi ezvinyorwa zvingangoita zvishoma.